Bakhalangesikole esingabhalisiwe e-Lay Centre Kubethusile ukuthi iPhambili ayibhalisile ngesikole esingabhalisiwe e-Lay Centre | News24
Bakhalangesikole esingabhalisiwe e-Lay Centre Kubethusile ukuthi iPhambili ayibhalisile ngesikole esingabhalisiwe e-Lay Centre
ISITHOMBE:nokulunga ngobese Isikole iPhambili Private School esise-Edendale Lay Ecunemical Centre okuthiwa asibhalisiwe ngokusemthethweni.
BAWOTHA ubomvu abazali babantwana abafunda esikoleni esizimele iPhambili Private School esise-Edendale Lay Ecunemical Centre emva kokuthola ukuthi asibhalisiwe ngokusemthethweni.
Lesi sikole esiqala ku-Grade R kuya ku-Grade 3 sineminyaka engaphezu kweshumi sasungulwa emva kokuba abelungu ababesisungulile bahamba kule ndawo. Kuthiwa kumanje ngisho nesibalo sabafundi sehlile, emva kokuba abazali bethole lezi zindaba.
Omunye wabazali abakhathazekile ongathandanga ukudalulwa uthe izinga lokufunda liphezulu kulesi sikole, okubakhathazayo nje ukuthi asibhalisiwe ngokusemthethweni noMnyango wezeMfundo. Uthe yena uze wathola kulo nyaka ngoba esefunela umzukulu wakhe isikhala kwezinye zezikole zasedolobheni, lapho etshelwe khona ukuthi isikole asibhalisiwe ngokusemthethweni.
“Ngishaqekile uma ngizwa ngalokhu njengoba lesi kungesinye sezikole ebesisithatha ngokuthi sihamba phambili ezindaweni zabantu abamnyama. Phezu kwalokho ngenkathi ngifuna isikhala kwesinye sezikole, ngitshelwe ukuthi uma bemthatha uzoqala phansi kwa Grade R.”
Uqhube wathi ngoNdasa walo nyaka emhlanganweni wabazali obusesikoleni omunye wabazali ubhoboze ithumba ngalokhu, okuthe uma abazali becela incazelo kwangaphetha kahle. Uthe kumanje abazali bayazikhipha izingane zabo ngamacozucozi njengoba nemali ekhokhwayo kulesi sikole ingu-R700 ngenyanga.
Omunye umzali naye ongathandanga ukudalulwa uthe bafuna kuphenywe kabanzi ukuthi kwenzeka kanjani isikole esineminyaka sihlale singabhalisiwe ngokusemthethweni.
Umnikazi wesikole futhi onguthishanhloko uMnu Sipho Ngcobo uvumile ukuthi lesikole asibhalisiwe ngokusemthethweni, wathi uMnyango wezeMfundo usezinhlelweni zokuthi sibhaliswe ngokusemthethweni.
Ubuye wathi abazali bayazi ngalokhu , wathi kumanje lolu daba luphethwe ehhovisi elikhulu likaMqondisi-Jikelele woMnyango wezeMfundo UDkt Nkosinathi Sishi.
Uthe kuthathe isikhathi eside ngenxa yemigomo nemibandela ebekufunakala siyilandele.
Okhulumela umnyango uMnu Sihle Mlotshwa uthe basalindele umbiko ovela ehhovisi likaMqondisi- Jikelele ukuze baphenye.